UKUHLALWA KWEZOMTHETHO NGOTYALO-MALI eJamani | IXESHA LE-100% LEMPUMELELO | ENGABEKI NXAXOLO | IGISA LOKUNDWENDWELA Jamani, Uhanjiso lwezoQoqosho ngokutyala eJamani ngokuhlala kutyalo-mali eJamani, ukuhlala ngokutyala eJamani, ukuhlala ngeenkqubo zotyalo mali Ge
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali eJamani kunye neGolden Visa
Sibonelela ngeenkonzo zokufudukela kwezoqoqosho eJamani:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala eJamani
● Ubumi ngokutyala imali eJamani
● IVisa yegolide eJamani
● Ipasipoti yesibini evela eJamani
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eJamani ngokutyala izindlu nomhlaba
Best Abameli bokuhlala ngokuTyala eJamani Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali eJamani kunye nabarhwebi beepropathi zokuba ngumhlali eJamani basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eJamani kubonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala eJamani, Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali eJamani, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eJamani, ukuhlala okwesibini ngotyalo-mali eJamani, ukuhlala kabini ngotyalo-mali eJamani, ubumi kunye nokuhlala ngokutyala eJamani. , Ukuhlala isigxina ngotyalo-mali eJamani, ukuhlala okwethutyana ngotyalo-mali eJamani, ukuhlala kwakhona ngesikimu sotyalo-mali eJamani, Ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo-mali eJamani, Ubummi ngotyalo-mali eJamani, Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eJamani, Ubumi ngenkqubo yotyalo-mali eJamani, okwesibini Ubummi ngotyalo-mali eJamani, ubumi bobabini ngotyalo-mali eJamani, indawo yokuhlala kunye nobumi ngokutyala eJamani, ukuhlala kunye nobumi ngokutyala eJamani, iinkqubo zoBumi bezoqoqosho eJamani, Ubumi ngenkqubo yotyalo-mali eJamani, Ubumi ngezikim zotyalo-mali eJamani, okwesibini ipasipoti eJamani, ipasipoti yesibini Iinkqubo ze-ort eJamani, inkqubo yesibini yokundwendwela eJamani, ipasipoti yesibini eJamani, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini eJamani, ipaspoti yesibini yezopolitiko eJamani, ipasipoti yesibini yotyalo-mali eJamani, ipasipoti yesibini yokuba ngabemi eJamani, iskim sepasipoti yesibini eJamani, okwesibini Izikimu zokundwendwela eJamani, iiVisa zegolide eJamani, iiVisa zegolide eJamani, iinkqubo zeVisa zegolide eJamani, inkqubo yegolide yegolide eJamani, eyesibini igolide eJamani, inkqubo yesibini yegolide eJamani, i-visa yegolide eJamani, ubumi kunye nevisa yegolide eJamani, ukuhlala kunye ne-visa yegolide eJamani, ubumi begolide begolide eJamani, inkqubo yegosa yegolide eJamani, izikimu ze-visa zegolide eJamani.
"1 izisombululo zokumisa" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala eJamani ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalo-mali oluncinci eJamani lokuHlala kwakhona ngokutyala: I-EUR 200,000 (iVisa yegolide eJamani)
Intshayelelo eJamani kunye nokuHlala kwakhona ngoTyalo mali
Funda ngakumbi ngeJamani
Njengoqoqosho olukhulu lwaseYurophu kunye nelizwe lesibini elinabantu abaninzi (emva kweRussia), iJamani ngumntu obalulekileyo ovela kwimibutho yezemali, yezopolitiko neyokhuseleko. Imfazwe yaseYurophu yanyanzelisa iJamani kwiimfazwe ezimbini ezonakalisayo kwinxalenye enkulu yenkulungwane yamashumi amabini kwaye yashiya isizwe sithatha inxaxheba kwimikhosi yama-Allied yase-US, e-UK, eFransi naseSoviet Union ngo-1945. imibutho ephambili yezemali kunye nezokhuseleko, i-EC (ngoku eyi-EU) kunye ne-NATO, ngelixa i-GDR yobusoshiyali yayisecaleni kweSoviet-eqhuba iWarsaw Pact. Ukusuka kuloo ndawo ukuya phambili, iJamani isebenzise iiasethi ezinkulu ukuzisa ukusebenza kwempuma kunye nomvuzo ukuya kwimigaqo yasentshona. NgoJanuwari 1999, iJamani namanye amazwe ali-10 e-EU athi thaca imali yorhwebo yaseYurophu, i-euro.
Nazi iinjongo ezininzi zokuba ubomi baseJamani bukhulu kakhulu!
Ngokudibana namazwe awahlukeneyo ngaphakathi kwilizwe laseNtshona, iJamani intle ukuhlala kuyo. Ingxelo yakutshanje yenkampani yabacebisi iMercer ibeke ikomkhulu iBerlin njengesixeko se-106 esineendleko eziphezulu kwezingama-200 ezivavanyiweyo kwihlabathi liphela. ILondon okwethutyana yayiyinombolo ye-12, ngelixa iindawo zasezidolophini zaseSwitzerland - iZurich (3), iGeneva (5), kunye neBern (9) -zenze ezilishumi.
Ukusuka kwincopho yeAlps egutyungelwe likhephu emazantsi ukuya kwisanti engafakwanga yolwandle emantla, iJamani ineembono ezininzi kakhulu.
Ukuba uhlala eBerlin, i-sandstone bluffs yaseSaxonian Switzerland yenza injongo yangaphandle. Ukhenketho kumgama omfutshane ukusuka eMunich kwaye ungatsiba emanzini axabisekileyo eLake Starnberg. Ngapha koko, xa unokuthi uncedise iCologne, ungahamba ngesikhephe uzikhuphele iRhine… kwaye undwendwele indawo yewayini ebhiyozelwa leli lizwe njengoko uhamba.
Inkqubo-sikhokelo yoololiwe yaseJamani mhlawumbi ayizukubiza ngexabiso eliphantsi, kodwa ngokuqinisekileyo iyakhawuleza kwaye ityebile.
Ukufika usuka eHamburg emantla uye eMunich emazantsi kuthatha iiyure nje ezintandathu. Ngaphezu koko, nokuba ungaphantsi kwe-avareji kuloliwe okhawulezayo we-ICE, uya kufumana ithuba lokuphumla imilenze yakho ediniweyo kwigumbi elithozamisayo, elizolileyo elinokuba nendawo ephezulu yomgca kwiintlanga ezahlukeneyo.
Ukuthabatha iimarike zeKrisimesi
Kwiintlanga ezininzi, lixesha elihle elidimazayo xa iintsuku ziqala ukutsala ngexesha lokuvuna. Kwakhona, ubusika ngokuqinisekileyo bunokubonakala buhle kakhulu eJamani. Nangona kunjalo, ngethamsanqa, indawo ezisezidolophini ziguqulwa zaba lixesha elibandayo lonyaka omangalisayo ngasekupheleni kukaNovemba xa iKrisimesi ibonisa ukukhanya kwezixeko ezikulo lonke ilizwe.
Imithwalo yamaxesha oluntu
EJamani, amatyeli oluntu awahambelani nekhefu elisemthethweni lonyaka. Ngaphezulu, iindawo ezimbalwa zikhululeka ngokumangalisayo kwezi ntsuku.
Umthombo kwiphondo elisemazantsi eBavaria unezihlandlo ezili-13 zikawonke-wonke ngonyaka. Ke ngaphezulu kweentsuku ezingama-30 ushiye imibutho emininzi ukuba uyinike njengomgangatho, ungalindela ukuba zongezwe iintsuku ezilishumi elinesine zokuphanda iJamani kunye neentlanga eziqukayo.
Ukulula kokufumana umgca omtsha womsebenzi
Ngenxa yezoqoqosho oluzinzileyo, kulula kakhulu ukufumana umgca omtsha womsebenzi eJamani kunakwelinye ilizwe laseNtshona. Ukungabinamsebenzi kwelona nqanaba lisezantsi ukusukela oko baphinda badityaniswa ngo-1990, kwaye abaphumeleleyo banexesha elifanelekileyo kakhulu - yi-10% kuphela yabaphumeleleyo abasebenza kwicandelo eliqhawulwe kuloo nto bebeyijonga.
Izibonelelo zosapho ezikhululekileyo
Kwimeko yokuba uxhonywe kwakudala, ubhiyozela izihlangu, sukuba noxinzelelo! IJamani inezinto ezininzi zokuzisa etafileni nawe. I-Bundesrepublik ine-liberal ilungiselelo lokuqwalaselwa kwezentlalo kubazali abangakhethiyo. Oomama abatsha kunye nootata banokwahlula ikhefu elihlawulelweyo phakathi kwabo ngaphezulu kweenyanga ezili-14. Ngaphezulu, ukongeza, urhulumente uya kukuhlawula imali ngokunyamekela abantwana bakho, kude kube kwinqanaba lokufikelela kwi-18.
Ukwafumana indawo eqinisekisiweyo kwisikolo sabantwana abancinci ukususela mhla umntwana wakho ajika unyaka ubudala-kwaye iindleko zincinci lezo zeentlanga ezikufutshane, umzekelo, iNetherlands.
Iinkcukacha ezisisiseko zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali eJamani
Ubuncinci botyalomali Ukuhlala kwakhona ngokutyala eJamani
I-EUR 200,000 (iVisa yegolide eJamani)
Imirhumo eyongezelelweyo visa yegolide ye Jemani
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eJamani
I-visa yeshishini loosomashishini (ixesha elifutshane / ixesha elide) / imvume yokuhlala
Iqhubekeka nexesha lokuhlala ngokutyala eJamani
Emva kweminyaka esi-8 sihleli
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseJamani
Iinketho zotyalo mali ze Ukuhlala kwakhona ngokutyala eJamani
Gcina imali kwaye udale imisebenzi ngeziko laseJamani kwimisebenzi yeshishini / yokurhweba. Utyalomali olubalulekileyo lwenziwa kwi.
> Oomatshini nezixhobo
> Utshintsho kubemi
> Iinkonzo zeMali (ukubhenka, i-inshurensi)
Amandla oMbane oMnyama
> Elektroniki kunye neMicrosoft-technology
> Ukuhambisa ngenqanawe / elwandle
> Izithuthi kunye nezoPhapho
Umzi mveliso we-IT (isoftware, idatha kunye nokubonisana)
> Iikhemikhali kunye nezixhobo
> IiSayensi zoBomi
Kutheni uye kuhlala kwindawo yokuhlala ngokutyala eJamani
IJamani, ngokwezopolitiko, amandla ezoqoqosho kunye namathemba eshishini, lelinye lawona mazwe abalulekileyo emhlabeni. Lelona lizwe likhulu kwiNtshona Yurophu elinesiseko esinezixhobo, imfundo, ezempilo kunye neenkqubo zentlalontle kwaye lilungu eliphambili le-EU kunye nommandla waseSchengen. U-BYou kunye namalungu osapho lwakho baya kufumana ubummi baseJamani ngexeshana elifutshane ngokutyala imali kwishishini laseJamani, bakunike ukufikelela ngaphandle kwama-visa kuwo onke amazwe akummandla waseSchengen nakulo lonke elaseYurophu. Akufuneki ukuba uhlale ngokomzimba, kwaye uyakufanelekela ukuba ngummi emva kweminyaka embalwa yokuhlala.
Ukufudukela kosapho eJamani
Ngaphandle kwezidingo ezongezelelweyo zotyalo-mali, ungazandisa izibonelelo zemvume yakho yokuhlala yaseJamani kumalungu osapho osondeleyo, kubandakanya iqabane lakho kunye nabantwana abancinci, uyakufaka isicelo semvume yokuxhomekeka kubumbano losapho kubathandekayo bakho nje ukuba ubuzwe bakho.
Ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eJamani
Kuya kufuneka ubhale phantsi ukuba unemali oyisebenzisileyo kwaye uyifumene ngokusemthethweni. Kuya kufuneka ube neendlela zemali zokuzixhasa wena kunye nosapho lwakho, kunye ne-inshurensi yezonyango okungenani i-EUR 30,000. Emva kokugcwalisa onke amaxwebhu kwaye kukho isigqibo sokuba utyalomali lwakho luluncedo kwilizwe liphela okanye ummandla othile, imvume yakho iyakunikwa kwisithuba nje seenyanga ezi-6-8. Ipemethe iya kukunika amalungelo afanayo nabemi baseJamani, ngaphandle kokukwazi ukuvota kunyulo lwepalamente kwaye usebenze.
Ukuba uneminyaka emi-5 yokuhlala ngokusemthethweni eJamani, unokufaka isicelo sokuhlala.
Imfuno yemali eJamani
Imfuneko yokufumana indawo yokuhlala yaseJamani esekwe kutyalomali kukuba ishishini lakho liluncedo olubalulekileyo kwingingqi okanye kwilizwe liphela. Njengomthetho wesithupha, kuya kulindeleka ukuba utyale i-1 yezigidi zeerandi kwinkampani yaseJamani (entsha okanye esele ikho), kwaye wenze kwaye ugcine imisebenzi eli-10 kubemi baseJamani nokuba nomxhasi wasekhaya wesicelo sakho akufuneki.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali eJamani
Iqela lethu Kuhlala ngaBameli boTyalo-mali baseJamani kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha kweJamani ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo eJamani ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela eJamani, indawo yokuhlala ngokutyala imali evela eJamani kunye namanye amathuba okungena kwelinye ilizwe, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali eJamani okanye iGolden Visa yaseJamani okanye ubummi ngotyalo-mali oluvela eJamani okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakumathuba otyalo-mali kwezindlu eJamani, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani Jemani okanye elunxwemeni, izibonelelo zabantu eJamani nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi eJamani nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo kubemi baseJamani:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali yeJamani, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena eJamani, abarhwebi abafudukela eJamani abafikelelekayo eJamani, indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo-mali eJamani, indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo-mali eJamani kunye nenkampani yabathengi efikelelekayo eJamani.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukusuka eJamani ukuya kumazwe angama-37.
I-visa yegolide eJamani ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngotyalo-mali ukusuka eJamani ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eJamani ukuya kumazwe angama-37.
Ukufuduka okusekwe kwishishini ukusuka eJamani ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eJamani.
Iinkqubo zeVisa zegolide eJamani ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi beenkqubo zotyalo-mali ukusuka eJamani ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eJamani ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eJamani ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali lwaseJamani ngeeNdawo zokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo-mali lokuthengiswa kwezindlu eJamani ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali eJamani, nanini na, xa efuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo ngokuhlala kwabo ngokutyala eJamani. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa bezindlu eJamani abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezilungileyo eJamani, befumana eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala izezona ndawo ihle eJamani notyalo mali kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba eJamani.
Kufuneka uyazi -Ukuhlala kwakhona kweJamani ngoTyalo mali
Ukuhlala kwakhona ngeGqwetha loTyalo-mali eJamani liza kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu olunesiqinisekiso sokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutyala imali eJamani. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zokuHlala kwakhona ngokuTyala eJamani kubandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka eJamani okanye eJamani, ngokusekwe kwiziphakamiso eziza kwenziwa
Siqhuba inkuthalo yokuqala ngenxa yoku, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eJamani kubaxumi ngokufumana imvume yokuhlala eJamani kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo efanelekileyo yaseJamani, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili kunye nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sotyalo-mali eJamani kuya kufuneka sifumane iikopi ezivavanyiweyo zepasipoti yomthengi kunye namalungu osapho.
Inguqulelo kunye ne-apostille yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalo-mali eJamani. Amagqwetha ethu akhethekileyo okuhlala ngokutyala imali eJamani kunye negosa legolide liya kunceda ekugcwaliseni iifom namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu okuhlala kwakho nawosapho lwakho afumane isicelo sokutyala eJamani, siya kuwuzalisa ngabasemagunyeni baseJamani.
Nje ukuba isicelo sakho sokuhlala ngokutyala eJamani samkelwe, sabelana ngeendaba ezimnandi nawe kwaye siqala ukulungiselela ezinye inkxaso.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngoBumi ngeenkonzo zotyalo-mali eJamani kubantu abakhankanywe apha ngezantsi okanye amashishini eJamani:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali eJamani azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu ezisuka okanye eJamani.
Kuhlala ngokweenkqubo zotyalo-mali eJamani azinikezelwa kuhlolo lobuchwephesha eJamani okanye kwi-espionage yemizi-nkqubo yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eJamani.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali eJamani awanikezelwa ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho eJamani.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali kweJamani ayenzelwa abantu abajongana nemathiriyeli yemfuza eJamani.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali eJamani ayisiyoshishini elisebenza ngezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya eJamani.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeJamani ayifumaneki kubantu baseJamani abasebenza kurhwebo, ukugcinwa eJamani, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oluntu.
Kuhlala ngotyalo-mali kweJamani ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo kweJamani ayizizo ezenkolo kunye neenkonzo zabo zokunceda eJamani.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Jemani ayibonelelwa ngabantu abajongana nemifanekiso engamanyala eJamani.
Indawo yethu yokuhlala abameli eJamani abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eJamani.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okulumkisa ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubathengi baseJamani kunye ne-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva kuko nakuphi na ukwaliwa kwabasemagunyeni eJamani ukuze kuvunywe isicelo Kuhlala ngotyalo-mali eJamani.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala eJamani nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngobume obuhle ngokuxhasa utyalo-mali eJamani kutyalo-mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nokucwangciswa kwezindlu eJamani.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho zaseJamani, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Ukuhlala kwethu ngeenkonzo zotyalo-mali eJamani zinikezela ngexabiso elinexabiso eliphantsi, ngezinga lempumelelo elifikelelekayo eJamani.
Sithathe iminyaka yamava okuhlala kwakhona eJamani sixhasa abathengi kunye neentsapho zabo eJamani.
Amava okuhlala kwakhona ngabaceli botyalo-mali eJamani kunye nabameli bezomthetho eJamani ababonelela ngenkxaso kubaxhasi.
Sinezona solicitors zibalaseleyo kunye neearhente zenkqubo yokuphatha yaseJamani kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eJamani nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu eJamani
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya iJamani, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko apho ukuhlala kwakho ngokutyala imali eJamani kungaphumeleli, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzisayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuHlala kwakhona ngokuTyala eJamani
Ukubala iindleko zokuhlala kwakhona ngokutyala imali eJamani nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi baseJamani, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eJamani kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa kweJamani
Inkqubo yemvume yokusebenza eJamani
Ukuhlala okwethutyana eJamani
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali eJamani kunye nezinye iiNkonzo
Sibhale uluhlu lweenkonzo ezimbalwa esizibonelelayo eJamani ukulungiselela iimfuno ezikhawulezileyo okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukufudukela eJamani nosapho lwakho ngokutyala, thina njengeqabane lakho eJamani, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eJamani ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle koKuhlala kwakhona ngokubonisana notyalo-mali eJamani, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR nakwiJamani, ongazukuyifumana phantsi kwesambrela esinye esibonelelwe ngabaphi na abanye abacebisi baseJamani abasenza ivenkile yokumisa iJamani kunye namazwe ayi-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini laseJamani ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu engaphaya koBumi ngokutyala imali eJamani ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokuzimanya eJamani nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani eJamani okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eJamani zitshiphu kuthi.)
Iakhawunti yeBhanki eJamani
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eJamani uyakufuna iakhawunti yebhanki yobuqu eJamani kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eJamani, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula eJamani
Ngaba ufuna ukubonisana neJamani, kuba izisombululo zentlawulo yedijithali eJamani Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye yefintech eJamani okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali Jemani ukuba uceba qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eJamani ukuqala kwangoko eJamani.
Iinkonzo ze-HR eJamani
yethu Inkampani yabasebenzi eJamani inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba eJamani free.
Iinombolo zeFowuni eyiyo eJamani
Iinkqubo zeefowuni zeshishini eJamani kunye amanani abonakalayo eJamani Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eJamani
Accounting, ngenxa yenkuthalo efanelekileyo eJamani kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eJamani
Ukuseta ishishini eJamani
Emva kokuhlala ngokutyala eJamani, ukuseta ishishini kwi Jemani .
Sinikezela ngezisombululo ezingezantsi ze-IT eJamani
Uyilo lwewebhu eJamani
Uphuhliso lwezorhwebo eJamani
Uphuhliso lwewebhu eJamani
Uphuhliso lweBlockchain eJamani
Uphuhliso lweApp eJamani
Uphuhliso lweSoftware eJamani
Amagqwetha okuHlala kwakhona ngoTyalo-mali eJamani
Sibonelela ngokuhlala ngokusemthethweni kwezisombululo zotyalo-mali eJamani kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, eJamani, siziinkokheli, inkampani yethu yezomthetho eJamani ineearhente zokufudukela eJamani, sinegama lokuhambisa awona mava asemagqabini okwenza iinkonzo eJamani kunye Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseJamani kunye neentsapho zabo. Indawo yethu yokuhlala liqela elityala imali eJamani ibonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala eJamani, kwimvume yakho yokuhlala eJamani yamkelwe.
Amandla egqwetha laseJamani ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngokuHlala kwakhona ngabaceli botyalo-mali eJamani. Ukuba useJamani okanye uceba ukutyelela iJamani, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani eJamani ukude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla waseJamani. Kuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo, kufanelekile ukuba ukhutshiwe okanye ubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli waseJamani.
Imibuzo ebuzwa qho -Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali eJamani
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala eJamani?
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eJamani, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala eJamani ngokutyala imali kuqoqosho lwaseJamani ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njlnjl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali eJamani, ukuhlala kwenkqubo yotyalo-mali eJamani. ixhaswe kukuhlala ziinkonzo zotyalo-mali eJamani, ngokuhlala kwethu okugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eJamani, indawo yokuhlala eyiyo ngamagqwetha otyalo-mali eJamani kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo-mali eJamani, abasebenza kwindawo yokuhlala eyiyo ngabameli botyalo-mali eJamani, kunye neefem eJamani.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali eJamani | Ukuhlala kwakhona ngabameli botyalo mali eJamani | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eJamani | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eJamani | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo-mali eJamani
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngotyalo-mali eJamani?
Ubummi ngotyalo-mali eJamani, bunokuchazwa njengokufumana ubumi baseJamani ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseJamani ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl.njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali eJamani, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali yaseJamani exhaswa bubummi ngeenkonzo zotyalo-mali eJamani, ngobona bumi bethu bubugqwetha ngamagqwetha otyalo-mali eJamani, abemi abangcono ngamagqwetha otyalo-mali eJamani kunye nobumi obugqwesileyo ngabacebisi botyalo-mali eJamani, besebenza ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo-mali eJamani, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eJamani.
Iinkonzo zongeniso lwabatyali mali ezingenaxabiso eJamani | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela eJamani | Utyalomali olufikelelekayo lwamagqwetha eJamani | Abatyali mali abafikelelekayo eJamani | Abatyali mali abafikelelekayo eJamani | Iifemu zomthetho ezingenaxabiso ezifikelelekayo eJamani
Iyintoni inkcazo yepaspoti yesibini eJamani?
Ipasipoti yesibini eJamani, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni baseJamani ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseJamani ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Iinkonzo zokundwendwela zesibini eJamani, ngamagqwetha esibini eepasipoti eJamani, awona magqwetha esibini eepasipoti eJamani kunye nabacebisi besibini abaphuma phambili eJamani, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela zesibini eJamani, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eJamani.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini eJamani | Iiarhente zokundwendwela zesibini eJamani | Amagqwetha esibini epasipoti eJamani | Igqwetha lesibini lokundwendwela eJamani | Abacebisi bokundwendwela besibini baseJamani
Yintoni inkcazo yevisa yegolide eJamani?
I-visa yegolide eJamani, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala eJamani ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseJamani ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, ukuthengisa izindlu nomhlaba, njl. Iinkonzo zeVisa zegolide eJamani, ngamagqwetha ethu abalaseleyo egolide eJamani, awona magqwetha egosa aseburhulumenteni eJamani eJamani kunye nabacebisi abagqwesileyo begolide baseJamani, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide eJamani, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eJamani.
Iinkonzo zevisa ezimnandi eJamani | Iiarhente zevisa ezimnandi eJamani | Amagqwetha egolide egolide eJamani | Amagqwetha egosa egolide eJamani | Abacebisi ngevisa zegolide eJamani
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala eJamani?
Ubuncinci botyalo-mali kubuhlali ngokutyala eJamani yi-EUR 200,000 (igolide visa eJamani).
Ngaba uyayinika inkxaso yezomthetho iJamani yokuHlala kwakhona ngokutyala?
Ewe, igqwetha lethu eJamani kunye neearhente eJamani zibonelela ngenkxaso yokuHlala kwakhona ngokutyala eJamani.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eJamani kubiza kakhulu?
Iindleko zokuHlala kwakhona ngoTyalo-mali eJamani kunye nokuHlala kwakhona ngeemfuno zengxowa mali yotyalo-mali eJamani yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wokubonisana ngoBuhlali ngoTyalo-mali eJamani, sikwabonelela ngezinye izinto ezininzi zokuxhasa ukuhlala kwakhona ngezisombululo zotyalo mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokwenza isicelo sokuhlala ngokutyala imali eJamani okanye kwi-visa yabatyali eJamani?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala eJamani ukusuka eAsia, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eJamani ukusuka e-Afrika, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eJamani ukusuka eYurophu, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eJamani ukusuka eMzantsi Melika, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eJamani usuka eMalaysia, Ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eJamani usuka eBangladesh, Uhlala ngokutyala eJamani usuka eIndonesia, Uhlala utyalo-mali eJamani usuka eSri Lanka, Uhlala ngokutyala imali eJamani usuka eNepal, Uhlala kwakhona ngokutyala imali eJamani usuka eIndiya nakwiResidency. ngotyalo-mali eJamani ukusuka e-UAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali kweJamani
Cela ukubonisana simahla malunga nokuhlala kwakho ngokuTyala eJamani
Amagama abalulekileyo kubuhlali ngokuTyala imali eJamani
Icandelo loMphathiswa Wezempilo- www.dc.bund.de
Icandelo loMphathiswa wezoqoqosho kunye namandla www.bmwi.de
Icandelo loMphathiswa Wentsebenzo yezoQoqosho noPhuhliso- www.bmz.de
Icandelo loMphathiswa Wezolimo Nezolimo- www.ebmel.de
Icandelo loMphathiswa Wezobulungisa Nokhuseleko Kubathengi- www.bmjv.de
Icandelo loMphathiswa Wezemali- www.shokokshinlwan.de
IOfisi yamanye amazwe yaseJamani- www.auswaertiges-amt.de
Icandelo loMphathiswa Wezangaphakathi www.bmi.bund.de
Icandelo loMphathiswa Wezemisebenzi Nentlalo- www.bmas.de
Icandelo loMphathiswa Waseburhulumenteni Wezemicimbi Yosapho, aBantu abaDala, aBasetyhini noLutsha www.bbdd.ula
Icandelo loMphathiswa Wezomkhosi- www.bbg.de
Icandelo loMphathiswa Wezothutho kunye nezixhobo zedijithali- www.bmvi.de
Icandelo loMphathiswa Wezemfundo Nophando-www.bbng.de
Icandelo loMphathiswa Wezendalo, uLondolozo lweNdalo, uLwakhiwo kunye noKhuseleko lweNyukliya-www.dzomb.bund.de
Hlanganisa kwi ISebe lokuFudukela eJamani , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eJamani